10 DESIGNER BAGS SPOTTED IN “EMILY IN PARIS” – OOTDMYANMAR
10 DESIGNER BAGS SPOTTED IN “EMILY IN PARIS”
No Comments on 10 DESIGNER BAGS SPOTTED IN “EMILY IN PARIS”
“Emily in Paris” ဇာတ်လမ်းတွဲထဲမှာတွေ့ရတဲ့ ဒီဇိုင်နာထုတ်လက်ကိုင်အိတ် ၁၀ မျိုး
When Emily in Paris was released,alot of Burmese Fashionistas shared their love for this show. It happens in the lovely city of Paris, and was styled with the guidance of Patricia Field, the costume designer behind The Devil Wears Prada.
“Emily in Paris” ဇာတ်လမ်းတွဲထွက်လာတဲ့အချိန်မှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဖက်ရှင်ချစ်သူအများစုက ဒီဇာတ်လမ်းနဲ့ပက်သက်ပြီး သဘောကျတဲ့အကြောင်းတွေ ဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီဇာတ်လမ်းကို အချစ်တွေပြည့်လွှမ်းနေတဲ့ ပါရီမြို့မှာအခြေတည်ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပြီး ဖက်ရှင်စတိုင်တွေကိုတော့ The Devil Wears Prada ရုပ်ရှင်ရဲ့ ဝတ်စုံဒီဇိုင်းတီထွင်သူ Patricia Field က အကြံဉာဏ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
Lead star, Emily Cooper (Lily Collins) style is all about pastel preppy wardrobe with designer handbags to match. And if you’re addicted with all of them in the show, we rounded up 10 designer bags we spotted in this show.
ဇာတ်လမ်းတွဲရဲ့ အဓိကဇာတ်ဆောင်ဖြစ်သူ Emily Cooper (Lily Collins) ရဲ့ဖက်ရှင်တွေက သပ်ရပ်သန့်ရှင်းပြီး အထက်တန်းကျတဲ့ပုံစံကို ဦးတည်ထားတဲ့အပြင် ဝတ်စုံနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ ဒီဇိုင်နာထုတ်လက်ကိုင်အိတ်တွေနဲ့ လှလှပပတွဲဖက်ထားတာကိုလည်းတွေ့ရမှာပါ။ မင်းသမီးလေးကိုင်တဲ့ လက်ကိုင်အိတ်တွေအားလုံးကို သဘောကျနေသူတွေအတွက် ဒီဇာတ်လမ်းတွဲထဲမှာ အားလုံးရဲ့အမြင်ကိုဖမ်းစားနိုင်ခဲ့တဲ့ လက်ကိုင်အိတ် ၁၀ မျိုးကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
1. Chanel Limited Edition Pearl Bag
Limited Edition Pearl Bag, price unavailable, CHANEL
2. Kate Spade Dorie Large Bucket Bag
Dorie Large Bucket Bag, $321, KATE SPADE
3. Patricia Field Canary Handbag
4. Y/PROJECT Accordion Bag
Accordion Bag, $745, Y/PROJECT,
5. Marc Jacobs Jelly Snapshot Bag
Jelly Snapshot Bag, $237, MARC JACOBS,
6. Christian Louboutin Elisa Mini Suede Strass Shoulder Bag
Elisa Mini Suede Strass Shoulder Bag, $2450, CHRISTIAN LOUBOUTIN
7. Chanel Round as Earth Bag
8. Kate Spade Nicola Faux Fur Twistlock Chain Wallet
Nicola Faux Fur Twistlock Chain Wallet, $209, KATE SPADE
9. STAUD Mini Bissett Lizard-Embossed Leather Bucket Bag
Mini Bissett Lizard-Embossed Leather Bucket Bag, price unavailable, STAUD
10. Chanel Lambskin Flap Bag
Tags emilyinparis, Fashion, ootdmyanmar
← AMY-REBEL WILSON IS NOW FIT AND SHE LOOKS AMAZING → 05 STYLISH ASH HAIR COLOR IDEAS ALWAYS ON POINT